बालेन शाहले सार्वजनिक गरे चुनावी खर्च, के मा कति खर्च गरे ? | दर्पण दैनिक
बालेन शाहले सार्वजनिक गरे चुनावी खर्च, के मा कति खर्च गरे ?
प्रकाशित मिति: २०७९ असार ६ गते ०९:३७
काठमाडौं । देशकै ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्थानीय तह चुनावमा लागेको खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न शीर्षकमा लागेको कूल खर्च सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनको चुनावी खर्च तीन लाख चौरानब्बे हजार चार सय उनानब्बे रूपैयाँ रहेको छ । केहिँ समयअघि नै चुनावी खर्च सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने भनिए पनि विविध कारणले ढिला भएकोमा उनले माफीसमेत मागेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खर्चको विवरण केही समयअगाडि नै सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न कारणले ढिलो भएकामा माफी चाहन्छौं। हाम्रो चुनावी अभियानमा जम्मा खर्च तीन लाख चौरानब्बे हजार चार सय उनानब्बे रूपैयाँ (३,९४,४८९) भएको छ ।’